Vad är tidig intervention?
Vad är tidig intervention - Soomaali
Waa maxay faragelinta hore?
Waa maxay “faragelinta hore” macnaheedu?
Wax ka qabadka hore waxaa loola jeedaa adeegsiga istiraatiijiyad miyir leh oo lagu taageerayo horumarka ilmaha intuu isagu / iyadu aad u yar yahay. Waxaa muhiim ah in lagu dhiirrigeliyo carruurta yaryar inay bilaabaan ciyaarta iyo wada hadalka goor hore, maxaa yeelay taasi waxay aasaas u tahay horumarka canugga sii socda. Carruurta badankood waxay daryeelaan horumarintooda iyagoo isku dayaya inay la xiriiraan oo ay xiriir la yeeshaan dadka kale. Kuwa kale maaha dad dabiici ahaan dabiici ah waxayna leeyihiin fursado yar oo ay kaga qaybqaadan karaan ciyaarta iyo wada xiriirka. Carruurta maanta waqti aad u badan ayey ku qaadanayaan shaashadaha kala duwan hortooda. Tan macnaheedu waxa weeye in ku dhowaad dhammaan carruurtu ay haystaan ​​fursado ka yar ka-qaybgalka cayaaraha iyo wada-xiriirka marka loo eego sida ay dhab ahaan ugu baahan yihiin. Sidaas darteed Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) wuxuu soo saaray tilmaamo ah in carruurta ka yar laba sano aysan waqti ku qaadan karin shaashadaha hortooda.
Cilmi-baaristu waxay muujineysaa in carruurtu horumariyaan inta badan saddexda sano ee ugu horreysa noloshooda. Sidaas darteed waa muhiim inaadan sugin inay caruurteenu la qabsadaan horumarkooda, laakiin taa bedelkeeda aan sameyno wixii aan kari karno si aan u taageerno Dadka waaweyn waa inay masuuliyad iska saaraan hubinta in carruurtu helaan fursado badan oo ay ku bartaan ciyaarta iyo wada hadalka. Waxaan u isticmaali karnaa xeelado kala duwan si aan ugu dhiirrigelino carruurta inay nala xiriiraan oo ay nala macaamilaan inta ugu badan ee suurtogalka ah inta lagu jiro maalinta. Tani waxay sidoo kale xoojineysaa xiriirka ka dhexeeya ilmaha iyo qofka weyn.
Waa maxay “horumarka caadiga ah”?
Carruurta badankood si dhakhso leh ayey u kobcaan sannadaha ugu horreeya noloshooda. Waxay daryeelaan horumarintooda iyagoo sahaminaya oo la falgalaya dadka iyo walxaha ku xeeran agagaaraha. Tani waa sida ay u horumariyaan xirfadahooda dhaqdhaqaaqa, awooda xalinta dhibaatooyinka, awooda isdhexgalka, xirfadaha wada xiriirka iyo awooda ciyaarta. Markay carruurtu bartaan xirfado cusub, tani waxay u fureysaa fursadda sii wadashada barashada. Tusaale ahaan, markay carruurtu bartaan tilmaamidda, waxay xirfaddan ugu isticmaali karaan dadaallada cusub ee bulsheed. Waxay saameyn ku yeelan karaan dareenka dadka waaweyn si ay u tusaan waxa ay u maleynayaan inuu yahay madadaalo, waxa ay rabaan inay yeeshaan, ama inay weydiiyaan qof weyn waxa loo yaqaan. Sidan oo kale, carruurtu waxay sii wadaan inay bartaan waxyaabo cusub.
Booqo 1177.se si aad wax badan uga ogaato waxa ay tahay inay carruurtu sida caadiga ah ku bartaan da 'kala duwan.
Miyaan ka walwalayaa?
Haduu cunug dhib ku yahay wada hadalka, ciyaarta iyo la dhaqanka, tani waxay astaan ​​hore u tahay cudurka autism. Cudurka ootisamka waa magaca naafonimada neerfaha ee saameysa sida cunuggu ula kulmo ulana falgalo hareerahiisa / keeda.
Caruurta Ootisamka qaba waxay dhibaato kala kulmaan isdhexgalka bulshada iyo wada xiriirka. Tan waxaa badanaa lagu muujiyaa da'da yar cunug sameeya dhaqdhaqaaqyo yar, indho la'aan indhaha, u muuqda mid aan dan ka lahayn la ciyaarida dadka kale, iyo daahitaanka barashada hadalka. Intaas waxaa sii dheer, carruurta autism-ka badanaa waxay muujiyaan dabeecad soo noqnoqota iyo xiisaha kooban. Waa wax iska caadi ah inay doorbidaan walxo ama hawlo gaar ah, oo ay ku celceliyaan marar badan. Carruurta cudurka Ootisaamka qaba waxay waqti badan ku bixin karaan waxqabadyo “adduunyo iyaga u gaar ah”. Waxay sidaas ku noqon karaan khabiiro howlaha qaarkood, laakiin way ka gaabin karaan markay tahay la macaamilka, la ciyaarida iyo la xiriirka dadka kale.
En film om autismintervention
Bilow inaad la xiriirto﻿
Boggan waxaa sameeyay Qeybta Caafimaadka iyo Baxnaaninta ee Degmada Uppsala. Macluumaadka waxaa loogu talagalay qof kasta oo raadinaya tilmaamo ku saabsan sida loogu dhiirrigeliyo carruurta inay ka qaybgalaan ciyaarta iyo wada xiriirka.
Si aad ula xiriirto qofka mas'uulka ka ah waxa ku qoran bogga, u soo dir email: habiliteringen@regionuppsala.se